Global Voices teny Malagasy » Shily: Eritreritra momba ny horohorontany sy ny dingana fanarenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Shily: Eritreritra momba ny horohorontany sy ny dingana fanarenana
Voadika ny 01 Jona 2018 3:12 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Miranah
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Mediam-bahoaka, Voina
Ny Fihaonamben'ny Median'olon-tsotra Global Voices 2010  dia mikasa hampandray anjara ireo bilaogera Shiliana amin'ny alàlan'ny fifaninanana bilaogy  nokarakaraina niaraka tamin'ny fiarahamiasan'ny fikambanana OCD Iberoamérica . Tamin'ny andro voalohan'ny hetsika ho an'ny daholobe, bilaogera Shiliana dimy no nomem-boninahitra ho mpifaninana farany, ka ny iray no hibata ny loka lehibe indrindra.
Ny fifaninanana dia natao handrisihana ireo bilaogera Shiliana mba haneho ny heviny sy hizaran'izy ireo ny heviny mikasika ny toe-draharaha ara-tsosialy amin'izao fotoana izao taorian'ny horohorontany sy nandritra ny fanarenana ny firenena . Mpanoratra roa ato amin'ny Global Voices, Silvia Viñas  sy Felipe Cordero  no anisan'ny mpitsara tamin'ny fifaninanana. Ireto manaraka ireto ny 4 finalista.
Bilaogera Marcelo Aliaga manoritsoritra ny zavatra niainany nandritra ny horohorontany [es]: 
Nahita ahy tany Santiago ny horohorontany. Mijanona ato an-tsaiko ny trano izay nipetrahako, ny korontana, ny anjomara, ny aizina, ny lalantsara fidirana ary ny fiaretan-tory. Ankoatra izay, ny fandeha tahaka ny matoatoa (zombie) amin'ny maraina mba hijery ny sisa tavela ao an-tanàna (lapan'ny filoham-pirenena) la moneda, ny kianja, ny vovoka, saingy tsy teo izy (toy ny tsy nandalo teo) rehefa tapitra ny halehiben'ny fahasimbana.
Carolina Castro mahita ny toe-draharaha mampalahelo ao amin'ny vondrom-piarahamonina sasany voakasika [es] :
Androany, Constitución  no tanàna sisa tavela. Toy ny hoe tsy nisy tsunami nandalo efa-bolana lasa izay, tahaka ny iray amin'ny Alahady mandrakizay ny zava-misy. Tsy dia goavana loatra ny fahasamihafan'ny vondrom-piarahamonina hafa voakasiky ny horohoron-tany, mbola tsy Alatsinainy mihitsy eto. Mbola tsy niverina ny varotra ary mbola tsy niverina niasa ny vahoaka. Ny fahanginan'ny vahoaka no toetra manjaka ao an-toerana. Tsy mandalo ny olon-dehibe na dia hiarahaba vetivety fotsiny aza ary tsy milalao eny an-dalambe ny ankizy. Mandeha am-pahanginana, mihinana amim-pahanginana, ary maro, no miresaka mangina.
Na izany aza, eo an-dalam-panarenana ny firenena ary manoratra momba ny fanahin'ny Shiliana  i Cecilia Monge:
Ary farany ny fanarenana. Nanomboka nampiato ny tahotra izahay ary nanomboka nitadidy fotsiny ny tahotra. Nosoloana adidy ara-moraly ny fahatsapana tahotra ary nametraka anjara biriky isan-karazany na sorona manokana, fanomezana, asa an-tsitrapo, ranomaso eo anoloan'ny tatitra ataon'ny olombelona amin'ny fahitalavitra izahay.
Farany, Pablo Ramírez manana teny fankaherezana ho an'ireo mpiray tanindrazana aminy.
Tiako ny hanaraka ny tenin'i (mpikambana ao amin'ny Kongresy) Oscar Guillermo Garretón: Hivoaka mpandresy i Shily. Efa izany hatrany izy. Ho mora kokoa izany raha miara-miasa amin'izany isika. Tena tiako ny manonofy momba ny ampitso tsara kokoa. Mahafinaritra kokoa, azo antoka kokoa, ary tsara fanahy kokoa noho isika rehetra.
Hampahafantatra izay bilaogera mpandresy amin'ny fifaninanana amin'ny hoavy tsy ho ela izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/01/120268/
 Fihaonamben'ny Median'olon-tsotra Global Voices 2010: https://summit2010.globalvoicesonline.org/
 fifaninanana bilaogy: http://www.ocdiberoamerica.com/globalvoices/concurso-gv-2010/
 OCD Iberoamérica: http://www.ocdiberoamerica.com
 taorian'ny horohorontany sy nandritra ny fanarenana ny firenena: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/chile-earthquake-2010/
 manoritsoritra ny zavatra niainany nandritra ny horohorontany [es]:: http://www.ocdiberoamerica.com/globalvoices/2010/05/maliag/
 mahita ny toe-draharaha mampalahelo ao amin'ny vondrom-piarahamonina sasany voakasika [es]: http://www.ocdiberoamerica.com/globalvoices/2010/04/carolina-castro/
 manoratra momba ny fanahin'ny Shiliana: http://www.ocdiberoamerica.com/globalvoices/2010/04/cecilia-monge/
 manana teny fankaherezana : http://www.ocdiberoamerica.com/globalvoices/2010/04/pramirezt/